Kaompania My Crew : hanangana trano vita amin’ny tavoahangy | NewsMada
Kaompania My Crew : hanangana trano vita amin’ny tavoahangy
Tsy vitsy ny mpanakanto miady ho amin’ny fanajana ny tontolo iainana. Ny an’ny kaompania My Crew, asa mivaingana avy hatrany no hatao ary efa an-dalana mihitsy aza, any Toamasina any.
Manangana « éco-village artistique », izany hoe toerana iray ho an’ny zavakanto, saingy manaja ny tontolo iainana, ny kaompania My Crew, tarihin’i Claudio Rabemananjara. Ao amin’ny Cité Vohitsara no ahitana izany.
Ny tena hafakely : ho vita amin’ny tavoahangy plastika fa tsy biriky na hazo na koa « béton », toy ny mahazatra, ny « bungalows » sy ny trano fiasana na « atelier » ary ny toeram-pialamboly ao. Hanamboarana fanaka, fitaovana, kilalao, sns, kosa ny kodiarana efa niasa, tapatapa-kazo, « bidon », « cannettes », lamba, sns, izay samy efa tsy ilaina intsony sy saika hariana mihitsy aza. Miisa 10.000 ny tavoahangy efa voaangona amin’izao fotoana izao, araka ny nambaran’i Claudio.
Anasana ny olon-drehetra tsy ankanavaka ny fanamboarana ny « éco-village artistique » ka anisan’ireo efa hanolo-tanana, ohatra, ny mpianatry ny oniversite ao Toamasina. Misy koa ny olona avy aty Antananarivo. Ho tonga koa ny vahiny avy any ivelany, afaka iray volana, ary hizara ny traikefany amin’ny fanamboarana toerana toy izao.
Handray ny « Festival Art-Iary » andiany faharoa
« Mivezivezy matetika any ivelany ny kaompania ary mampitaha ny zava-misy any amin’ny aty. Hitanay fa efa simba ny tontolo iainana any ary mitady hizotra amin’izany koa ny eto amintsika. Ankoatra izany, hitako fa betsaka ny fako eto nefa tsy misy mpanodina. Heveriko fa anjaranay tanora ny manetsiketsika izany », hoy i Claudio, nanazava ny antony anaovan’izy ireo izao tetikasa izao.
Hotanterahina ny 1 hatramin’ny 5 novambra, ao amin’ity « éco-village artistique » ity, ny andiany faharoa amin’ny « Festival Art-Iary ». Niompana tamin’ny dihy ny andiany voalohany raha toa ka hivelatra amin’ny sokajin-javakanto rehetra ny amin’ity taona ity. « Mpanakanto miady ho amin’ny fanajana ny tontolo iainana no hasaina handray anjara amin’io. Ho avy any koa ny manampahaizana momba izany », hoy hatrany i Claudio.
Manentana ny rehetra mba tsy hanariary ireo kojakoja ireo ny kaompania My Crew fa mba hanangona sy hanatitra izany any amin’ny AFT Toamasina na ao amin’ny Maison de la coopération décentralisée Atsinanana na koa ao amin’ny Ofisim-paritry ny fizahantany ao Toamasina.